WeatherBoard waa la cusbooneysiiyay iOS 9 iyo iPads. | Wararka IPhone
Jailbreak dadka jecel waxay ku jiraan nasiib, nooca labaad ee tweak cajiib ah, WeatherBoard, ayaa dhawaan la sii daayay. Farsamadan, qaybteeda labaad, ayaa timaadda kordhiyo waafaqid macruufka 9 sidaas darteed koox koox labadii qaybood ee ugu dambeeyay ee iOS-ka ah ee lagu soo rogay tweak (waxaa jira nooc hore ama dhaxal u ah macruufka 7).
Tani si kastaba ha noqotee maahan tan cusub ee ay ku jirto, kuwa aan aqoon, WeatherBoard waa isbeddel noo ogolaanaya inaan ku darno animations fantastik ah Codsiga asalka ah ee "Cimilada" ee darbiyadayada, sidan ayaan ku abuuri karnaa runtii isku-dhafnaan qurux badan sida asalka muuqaalka xiddigo oo aan ku darno qubeys qarsoon oo xiddigo ah oo xagga dambe ah, ama buur baraf wata isla markaana isla xilligaas baraf ah , dariiq aad ugu haysatid Sawir-gacmeedka Animated Wallpapers-kaaga iPhone-ka ah (ma ahan kuwa kuwa Apple ay ku jirto kubbado midabbo leh oo dhaqaaqa).
Warku wuxuu ka baxsan yahay iswaafajinta nooca cusub ee iOS, qaabkan cusub ee tweak-ka waxaan ka helaynaa iswaafajinta «Keydinta Tamarta»Of iOS 9, qaabeynta waxaan heli karnaa taas markii la hawlgaliyo animations-ka tweak-kani waa kuwo naafo ah si loo badbaadiyo batteriga dhinacan.
Marka laga soo tago taas waxaan leenahay shaqooyin isku mid ah oo guuleysta sida had iyo jeer, ku dhis animations waraaqaha iyo xitaa in kuwan kale ay kuxiran yihiin hadday tahay maalin ama habeen, shaki la'aan iskudhafyo badan oo suurtagal ah oo loogu talagalay kuwa ugu hal abuurka badan.
Qaabkan cusub sidoo kale waa lagu daray taageerada iPad, in hadda aad ku raaxeysan karto dhammaan shaqooyinkan shaashaddiisa cajiibka ah, aalad aan si aad ah ugu raaxeysan doonno markii aan aragno sawir-gacmeedyo waaweyn oo leh animations cajiib ah.
Waxaas oo dhan waxaa dheer, waxaan sidoo kale u mari karnaa dhinaca midig ee shaashadda qufulka si aan u ogaanno qayb leh saadaasha hawada, sida aan u arki lahayn haddii aan furno arjiga dalabka, kaliya farta.
Isbeddelkan waxaa lagala soo bixi karaa Cydia ee BigBoss repo oo ay kujirto asal ahaan, waxay leedahay qiimo dhan $ 2'49.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » WeatherBoard ayaa loo cusbooneysiiyey qeybtiisa labaad ee iOS 9 iyo iPad [Muuqaal]
Sida loo dejiyo Siri Remote
Tijaabada Xtreme 4: dhammaan tallaabada tijaabada ee ku saabsan iPhone-kaaga